၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အတွက် တက္ကသိုလ်များမှ ခေါ်ယူလျှက်ရှိသော ပထမနှစ်ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာများအကြောင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ခေါ်ယူနေသော တက္ကသိုလ်များအကြောင်း စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပညာရေးဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။
သင်တန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားဦးရေ ၄၀၀ ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီး သိပ္ပံဘာသာ တွဲအတွက် အနိမ့်ဆုံးရမှတ် ၄၅၅၊ ဝိဇ္ဇာ+သိပ္ပံဘာသာတွဲ အနိမ့်ဆုံးရမှတ် ၄၂၀ နဲ့ ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲအတွက် အနိမ့်ဆုံးရမှတ် ၄၀၀ ရှိသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာတွေကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေရာနဲ့ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဒီနေရာ တို့မှ download ရယူနိုင်သလို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေ မှ လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ် သင်တန်းရေးရာဌာနမှလည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာ ထုတ်ပေး/ လက်ခံမည့်ရက် – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှစတင်ကာ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် အထိ
လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်နေရာ – ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ အမှတ် ၃၁၇၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမည့်ရက် – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်
ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ရမည့်ရက် – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် အထိ
အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် သင်တန်းရေးရာဌာန၊ ဌာနမှူး ဖုန်း-၀၁-၅၂၆၉၃၇၊ ၀၉၇၉၆၀၂၉၀၇ မှာ လည်းကောင်း မော်ကွန်းထိန်း – ၀၁-၅၄၃၂၇၃၊ ၀၉၉၇၀၆၀၈၀၃၃ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
(က) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထား လိုသူများသည် အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်-
(၁) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီသည့် နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(၂) ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်သူဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၅၀ နှင့်အထက် ရရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၃) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာနများမှ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်များ ပါဝင်သည့် ဘာသာရပ်တစ်ခုခုဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(ခ) စုစုပေါင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေ ၂၀၀ လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
( ဂ) သင်တန်းကာလ (၅) နှစ်ဖြစ်၍ အထူးပြုဘာသာရပ်အလိုက် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူများကို အောက်ပါ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဘွဲ့များကို ပေးအပ်ချီးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်မီပါက မဟာဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများသို့ အဆင့်ဆင့် တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်-
B.C.Sc(High Performance Computing)
(၅) ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကွန်ရက်ပညာ)
B.C.Tech.(Communication and Networking)
(ဃ) ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများကို သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် တွင်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန Website တွင်လည်းကောင်း၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် Website တွင် လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ စတင်လက်ခံသည့်ရက် – ၁၅-၆၂၀၁၈ ရက် (သောကြာနေ့)
လျှောက်လွှာနောက်ဆုံး လက်ခံမည့်ရက် – ၁၆-၇-၂၀၁၈ ရက် (တနင်္လာနေ့)
ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာမည့်ရက် – ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
ကျောင်းအပ်စတင် လက်ခံမည့်ရက် – ၁၆-၈-၂၀၁၈ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)
ကျောင်းအပ်နောက်ဆုံး လက်ခံမည့်ရက် – ၂၃-၈-၂၀၁၈ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)
( င) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများသည် အထက်ပါ ကျောင်းအပ်နောက်ဆုံးရက်ထိ ကျောင်းအပ်နှံရန် ဤတက္ကသိုလ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက အရန်ရွေးချယ်ထားသည့်စာရင်း (Waiting List) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားသူများထဲမှ ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ထပ်မံထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ ကျောင်းအပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(စ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါအထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-
(၁) ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်းမူရင်း
(၂) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူနှင့် မိဘနှစ်ပါး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတစ်စုံစီ
(၃) ဓာတ်ပုံသုံးပုံ (ဓာတ်ပုံ၏နောက်ကျောတွင် အမည်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲခုံအမှတ်ရေးရန်)
(ဆ) ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ပါရမီလမ်း၊ တက္ကသိုလ်များလှိုင်နယ်မြေ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ စာတိုက်သင်္ကေတ-၁၁၀၅၁သို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရမည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဖုန်း-၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
(က) မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများသည်၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ် (၄၅၀) နှင့် အထက် ရရှိအောင်မြင်ခဲ့သူများ လျှောက်ထား နိုင်သည်။ စုစုပေါင်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဦးရေ (၂၅၀) ဦးလက်ခံမည်။
(ခ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာနများမှ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်များပါဝင်သည့် ဘာသာတွဲတစ်ခုခုဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများလျှောက်ထားနိုင်သည်။
(ဂ) ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသောနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။
(ဃ) လျှောက်ထားလိုသူများသည် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၁) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် (သို့) အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ၊
(၂) အမှတ်စာရင်း (မူရင်း)
(၃)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ) (သို့) နိုင်ငံသားလက်မှတ် (မိတ္တူ) (သို့) နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက် ထားဆဲဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံစာမူရင်း
(င) သင်တန်းကာလမှာ (၅) နှစ်ဖြစ်ပြီး အထူးပြုဘာသာရပ်အလိုက် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူများကို အောက်ပါ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဘွဲ့များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည် –
(၁)B. C. Sc.(Software Engineering)
(၂) B. C. Sc.(Knowledge Engineering)
(၃) B. C. Sc.(Business Information Systems)
(၄) B. C. Sc.(High Performance Computing)
(၅) B. C. Tech.(Computer Communication and Networks)
(၆) B. C. Tech.(Embedded Systems)
(စ) အဆင့်မီပါက မဟာဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများသို့ အဆင့်ဆင့် ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။
(ဆ) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စိစစ်လက်ခံခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်မည်။
– လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ ၁၅-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၇-၂၀၁၈ အထိ
– ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကြေညာခြင်း ၁၅-၈-၂၀၁၈
– ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း ၁၆-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၉-၂၀၁၈ အထိ
(ဇ) သင်တန်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် website www.ucsm.edu.mm တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဖုန်း-၀၉-၈၉၆၅၀၂၂၁၅ နှင့် ၀၉-၇၈၆၅၀၅၀၁၂ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
ရန်ကုန်နိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သင်တန်း (တရုတ်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ ဂျာမန်ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ရုရှားဘာသာနှင့် ထိုင်းဘာသာ) အထူးပြုများသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
– တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နှင့်အထက် ရရှိသူများဖြစ်ရမည်။
– အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ် လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ကို ၆၅ မှတ်နှင့် အထက်ရရှိပြီး စုစုပေါင်း ရမှတ် ၄၀၀ နှင့်အထက် ရရှိသူများဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
– လျှောက်ထားသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမယ်။
လူတွေ့နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်မှာစတင်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အမှတ်စာရင်း မူရင်းကို လည်း မပျက်မကွက် တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ ကို ဇွန်လ ၁၅ ရက် မှစတင်ကာ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်ကို တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ကို ဦးစားပေးဘာသာရပ် ၃ ခုထိ ရွေးချယ်လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါတယ်။
တရုတ်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ – ၁၅၀ ဦး
ပြင်သစ်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ဂျာမန်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ဂျပန်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ကိုရီးယားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ရုရှားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ထိုင်းဘာသာ – ၅၀ ဦး
အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ဖုန်း-၀၁-၅၃၅၉၈၅၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်တန်း) ၀၁-၅၁၃၁၉၈၊ သင်တန်းရေးရာ ဌာန ၀၁-၅၁၅၂၃၆ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် ပထမနှစ်သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်
၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နဲ့အထက်ရသူများ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့် အသီးသီးကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။
သင်ကြားပို့ချပေးသွားမယ့် ဘာသာရပ်များမှာ Bachelor of Economics (Economics) (B.Econ (Eco)), Bachelor of Economics (Statistics) B.Econ(Stats), Bachelor of Commerce (B.Com), Bachelor of Business Administration (B.B.A) စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထား လိုသူတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင် တန်း စာမေးပွဲကို မည့်သည့်ဘာသာတွဲဖြင့်မဆို အောင်မြင်သူ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နဲ့အထက် ရရှိသူ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကျောင်းသားဦးရေကို ၁၂၀၀ ဦးထိ လက် ခံပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထား လိုသူတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘာသာကို ၄ နှစ်ကြာ တက်ရောက်သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထား လိုသူတွေအနေနဲ့ လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်နေရာသတ်မှတ်ချက်ကို ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွင် စုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)တွင် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နဲ့အထက်ရသူများ ဖော်ပြပါဘာသာရပ် တွေကို လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သင်ကြားပို့ချပေးသွားမယ့် ဘာသာရပ်တွေ က Bachelor of Accounting (B.Act), Bachelor of Population Studies (B.P.S), Bachelor of Public Adiministration (B.P.A), Bachelor of Development studies (B.Dev.S) စတဲ့ဘာသာရပ်တွေလျှောက် ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှစပြီး ဇူလိုင်၁၅ ရက်အထိ လက်ခံ ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၀င်ခွင့်စာရင်းရရှိသူများကို သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှာကြေညာပေးသွားမယ် လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို မည်သည့်ဘာသာ တွဲဖြင့်မဆို အောင်မြင်သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၅၀ နဲ့အထက် ရရှိသူ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကျောင်းသားဦးရေကို ၂၀၀ ဦးထိ လက်ခံပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ရဲ့ သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘာသာကို ၄ နှစ်ကြာ တက်ရောက် သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်နေရာသတ်မှတ်ချက်ကို ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ စုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၉- ၇၃၂၄၁၀၀၇၊ ၀၁- ၅၂၆၆၁၃ သို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် B.E/B.Arch/B.S သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဗိသုကာသင်တန်းတွေအတွက် အမျိုးသား ၂၀၀ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၆၅ ဦးရေ ထိ ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ (Cvil Engg)၊ ဗိသုကာ (Archtecture)၊ စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ ( Mechanical Engg:)၊ အီလက်ထရွန်နစ် အင်ဂျင်နီယာ (Electronic Engg:)၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ (Electrical Power Engg:)၊ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Computer Engineering & Information Technology)၊ မက္ကာထရွန်နစ် အင်ဂျင်နီယာ (Mechatronic Engg:)၊ သုတနည်းပညာ (Information Technology)၊ ဓါတု အင်ဂျင်နီယာ (Chemical Engg:)၊ ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ (Petroleum Engg:)၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး အင်ဂျင်နီယာ (Mining Engg:) နဲ့ ဇီဝနည်းပညာ (Biotechnology) သင်တန်းတွေကို ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါ။ သင်တန်းကာလအနေနဲ့ B.E/B.Arch ဘွဲ့အတွက် ၆ နှစ်၊ B.S ဘွဲ့အတွက် ၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ ပြီးစီးအောင်မြင်ပါက B.E/B.Arch ဘွဲ့နဲ့ B.S ဘွဲ့အသီးသီးကို တိုက်ရိုက်အပ်နှင်းချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာ အောင်မြင်ထားသူ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ သင်္ချာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေးဘာသာ စုစုပေါင်းရမှတ် ၃၀၀ နဲ့ အထက် ရရှိသူတွေဖြစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာတွေကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ထိ လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ၀င်ခွင့်တွေကို သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှာ ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက် မှ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်ထိ ကျောင်းအပ်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာနဲ့အတူ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ ကျောင်းသားနဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားမိတ္တူ၊ ခြောက်လအတွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ရောင်းစုံဓာတ်ပုံ ငါးပုံပူးတွဲတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာတွေကို တက္ကသိုလ်ရဲ့ သင်တန်းရေးရာဌာန သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာတွေကို တက္ကသိုလ်ရဲ့ သင်တန်းရေးရာဌာန (သို့) http://www.tum-mandalay.edu.mm တွင်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) သင်တန်းရေးရာဌာန ဖုန်း-၀၉၄၃၁၇၅၀၃၄၊ ၀၉၉
၇၇၇၉၉၉၄၂ ကိုလည်းကောင်း [email protected] ကိုလည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထနှစ်ဝင်ခွင့်ကို ကျောင်းသား ဦးရေ ၃၀၀ လက်ခံမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc) ငါးနှစ်သင်တန်း အတွက် ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး သိပ္ပံဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ထားသူ၊ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲရမှတ် ၄၀၀ နှစ့် အထက်ရရှိသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာနဲ့အတူ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ (မူရင်း၊ အမှတ်စာရင်း (မူရင်း)၊ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မိတ္တူ)၊ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ၊ ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံ ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာတွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားရေးရာ ဌာနကိုပေးပို့ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်မရရှိပါက တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် မဆုံးရှုံးစေရန် တခြားသော တက္ကသိုလ်များကိုလည်း လျှောက်ထားရန်လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာတွေကို ဒီနေရာမှာ download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ရေးရာ ဌာန ဖုန်း – ၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၂၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ ဌာန ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၃ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း အသီးသီးအတွက်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်သူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
-သန္တာ ၊ ဝေဝေ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှဈ ပထမနှဈဝငျခှငျ့ချေါယူနသေော တက်ကသိုလျမြားအကွောငျး စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ရနျကုနျပညာရေးတက်ကသိုလျ ဘှဲ့ကွိုသငျတနျး ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာချေါယူ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈအတှကျ ရနျကုနျပညာရေးတက်ကသိုလျရဲ့ ပညာရေးဘှဲ့ကွိုသငျတနျး ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာတှေ ချေါယူလကျြရှိပါတယျ။
သငျတနျးကို ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ ၃ ရကျမှာ စတငျဖှငျ့လှဈမှာဖွဈပါတယျ။ သငျတနျးသားဦးရေ ၄၀၀ ချေါယူမှာဖွဈပွီး သိပ်ပံဘာသာ တှဲအတှကျ အနိမျ့ဆုံးရမှတျ ၄၅၅၊ ဝိဇ်ဇာ+သိပ်ပံဘာသာတှဲ အနိမျ့ဆုံးရမှတျ ၄၂၀ နဲ့ ဝိဇ်ဇာဘာသာတှဲအတှကျ အနိမျ့ဆုံးရမှတျ ၄၀၀ ရှိသူတှေ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
လြှောကျလှာတှကေို ပညာရေးဝနျကွီးဌာန ဝကျဘျဆိုကျဖွဈတဲ့ ဒီနရောနဲ့ ရနျကုနျပညာရေးတက်ကသိုလျ ဒီနရော တို့မှ download ရယူနိုငျသလို နစေ့ဉျထုတျသတငျးစာတှေ မှ လညျးကောငျး၊ ရနျကုနျပညာရေး တက်ကသိုလျ သငျတနျးရေးရာဌာနမှလညျးကောငျး ရယူနိုငျပါတယျ။
ဝငျခှငျ့ လြှောကျလှာ ထုတျပေး/ လကျခံမညျ့ရကျ – ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ ၁၅ ရကျမှစတငျကာ ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျ အထိ
လြှောကျလှာတငျသှငျးရမညျ့နရော – ကြောငျးသားရေးရာဌာန၊ ရနျကုနျပညာရေးတက်ကသိုလျ၊ အမှတျ ၃၁၇၊ ပွညျလမျး၊ ကမာရှတျမွို့နယျ၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး
လူတှနှေု့တျဖွစေဈဆေးမညျ့ရကျ – ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၆ ရကျနဲ့ ရ ရကျ
ကြောငျးဝငျမှတျပုံတငျ ဆောငျရှကျရမညျ့ရကျ – ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၁၆ ရကျမှ စကျတငျဘာလ ၁၂ ရကျ အထိ
အသေးစိတျ အခကျြအလကျကို ရနျကုနျပညာရေးတက်ကသိုလျ သငျတနျးရေးရာဌာန၊ ဌာနမှူး ဖုနျး-၀၁-၅၂၆၉၃၇၊ ၀၉၇၉၆၀၂၉၀၇ မှာ လညျးကောငျး မျောကှနျးထိနျး – ၀၁-၅၄၃၂၇၃၊ ၀၉၉၇၀၆၀၈၀၃၃ ကို ဆကျသှယျမေးမွနျး စုံစမျးနိုငျပါတယျ။
သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာတက်ကသိုလျ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈ၊ ပထမနှဈသငျတနျး ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာချေါယူခွငျး
(က) သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာတက်ကသိုလျ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသငျနှဈ ပထမနှဈသငျတနျးသို့ ဝငျခှငျ့လြှောကျထား လိုသူမြားသညျ အောကျပါအရညျအခငျြးမြားနှငျ့ ပွညျ့စုံရမညျ-
(၁) တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ လြှောကျထားခြိနျ၌ တညျဆဲနိုငျငံသားဖွဈမှု ဥပဒနှေငျ့ကိုကျညီသညျ့ နိုငျငံသားဖွဈရမညျ။
(၂) ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲတှငျ အောငျမွငျသူဖွဈပွီး၊ စုစုပေါငျးရမှတျ ၄၅၀ နှငျ့အထကျ ရရှိသူမြား လြှောကျထားနိုငျသညျ။
(၃) တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲတှငျ မွနျမာနိုငျငံတဈနိုငျငံလုံးရှိ စာစဈဌာနမြားမှ သခငြ်ျာ၊ ဓာတုဗဒေ၊ ရူပဗဒေ ဘာသာရပျမြား ပါဝငျသညျ့ ဘာသာရပျတဈခုခုဖွငျ့ ဖွဆေိုအောငျမွငျသူမြား လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။
(ခ) စုစုပေါငျး ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူဦးရေ ၂၀၀ လကျခံမညျဖွဈသညျ။
( ဂ) သငျတနျးကာလ (၅) နှဈဖွဈ၍ အထူးပွုဘာသာရပျအလိုကျ အောငျမွငျပွီးမွောကျသူမြားကို အောကျပါ ကှနျပြူတာဆိုငျရာ ဘှဲ့မြားကို ပေးအပျခြီးမွှငျ့ သှားမညျဖွဈပွီး အဆငျ့မီပါက မဟာဘှဲ့သငျတနျးနှငျ့ ပါရဂူဘှဲ့သငျတနျးမြားသို့ အဆငျ့ဆငျ့ တကျရောကျခှငျ့ ရှိသညျ-
(၅) ကှနျပြူတာနညျးပညာဘှဲ့(ဆကျသှယျရေးနှငျ့ ကှနျရကျပညာ)
(ဃ) ၀ငျခှငျ့လြှောကျထားလိုသူမြားသညျ ၀ငျခှငျ့လြှောကျလှာပုံစံမြားကို သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာတက်ကသိုလျ တှငျလညျးကောငျး၊ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနWebsite တှငျလညျးကောငျး၊ သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာတက်ကသိုလျ Website တှငျ လညျးကောငျး ရယူနိုငျပါသညျ။
ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာ စတငျလကျခံသညျ့ရကျ – ၁၅-၆၂၀၁၈ ရကျ (သောကွာနေ့)
လြှောကျလှာနောကျဆုံး လကျခံမညျ့ရကျ – ၁၆-၇-၂၀၁၈ ရကျ (တနင်ျလာနေ့)
ဝငျခှငျ့ရရှိသူမြား၏ အမညျစာရငျးကွညောမညျ့ရကျ – ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရကျ (ဗုဒ်ဓဟူးနေ့)
ကြောငျးအပျစတငျ လကျခံမညျ့ရကျ – ၁၆-၈-၂၀၁၈ ရကျ (ကွာသပတေးနေ့)
ကြောငျးအပျနောကျဆုံး လကျခံမညျ့ရကျ – ၂၃-၈-၂၀၁၈ ရကျ (ကွာသပတေးနေ့)
( င) ဝငျခှငျ့ရရှိသူမြားသညျ အထကျပါ ကြောငျးအပျနောကျဆုံးရကျထိ ကြောငျးအပျနှံရနျ ဤတက်ကသိုလျနှငျ့ ဆကျသှယျဆောငျရှကျခွငျး မရှိပါက အရနျရှေးခယျြထားသညျ့စာရငျး (Waiting List) အဖွဈ ထုတျပွနျကွညော ထားသူမြားထဲမှ ဝငျခှငျ့ရရှိနိုငျရနျ ထပျမံထုတျပွနျ ကွညောသှားမညျဖွဈပွီး ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရကျ (ဗုဒ်ဓဟူးနေ့) နောကျဆုံးထား၍ ကြောငျးအပျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
(စ) လြှောကျလှာနှငျ့အတူ အောကျပါအထောကျအထားမြားကို ပူးတှဲတငျပွရမညျ-
(၁) ၂၀၁၈ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အမှတျစာရငျးမူရငျး
(၂) ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူနှငျ့ မိဘနှဈပါး၏ မှတျပုံတငျမိတ်တူတဈစုံစီ
(၃) ဓာတျပုံသုံးပုံ (ဓာတျပုံ၏နောကျကြောတှငျ အမညျနှင့ျတက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲခုံအမှတျရေးရနျ)
(ဆ) ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာမြားကို သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာတက်ကသိုလျ၊ ပါရမီလမျး၊ တက်ကသိုလျမြားလှိုငျနယျမွေ၊ (၁၂)ရပျကှကျ၊ လှိုငျမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။ စာတိုကျသင်ျကတေ-၁၁၀၅၁သို့ တိုကျရိုကျလြှောကျထားရမညျ။ အသေးစိတျသိလိုပါက ဖုနျး-၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ရုံးခြိနျအတှငျး ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
ပညာရေးဝနျကွီးဌာန အဆငျ့မွငျ့ပညာဦးစီးဌာန၊ မန်တလေးကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈ၊ ပထမနှဈသငျတနျး ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာချေါယူခွငျး
(က) မန်တလေးကှနျပြူတာတက်ကသိုလျသို့ ဝငျခှငျ့လြှောကျထားသူမြားသညျ၂၀၁၈ ခုနှဈတှငျကငျြးပခဲ့သော တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲတှငျ စုစုပေါငျးရမှတျ (၄၅၀) နှငျ့ အထကျ ရရှိအောငျမွငျခဲ့သူမြား လြှောကျထား နိုငျသညျ။ စုစုပေါငျး ကြောငျးသား/ကြောငျးသူဦးရေ (၂၅၀) ဦးလကျခံမညျ။
(ခ) တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲတှငျ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးရှိ စာစဈဌာနမြားမှ သင်ျခြာ၊ ဓာတုဗဒေ၊ ရူပဗဒေ ဘာသာရပျမြားပါဝငျသညျ့ ဘာသာတှဲတဈခုခုဖွငျ့ ဖွဆေိုအောငျမွငျသူမြားလြှောကျထားနိုငျသညျ။
(ဂ) ဝငျခှငျ့လြှောကျထားသူသညျ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့လြှောကျထားခြိနျ၌ တညျဆဲနိုငျငံသားဖွဈမှုဥပဒနှေငျ့ ကိုကျညီသောနိုငျငံသား ဖွဈရမညျ။
(ဃ) လြှောကျထားလိုသူမြားသညျ မန်တလေးကှနျပြူတာတက်ကသိုလျသို့ သတျမှတျလြှောကျလှာပုံစံဖွငျ့ တိုကျရိုကျလြှောကျထားနိုငျသညျ။
(၁) တက်ကသိုလျဝငျတနျးအောငျလကျမှတျ (သို့) အောငျမွငျကွောငျးထောကျခံစာ၊
(၂) အမှတျစာရငျး (မူရငျး)
(၃)နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျပွား (မိတ်တူ) (သို့) နိုငျငံသားလကျမှတျ (မိတ်တူ) (သို့) နိုငျငံသားဖွဈရနျလြှောကျ ထားဆဲဖွဈပါက သကျဆိုငျရာ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဦးစီးဌာန၏ထောကျခံစာမူရငျး
(င) သငျတနျးကာလမှာ (၅) နှဈဖွဈပွီး အထူးပွုဘာသာရပျအလိုကျ အောငျမွငျပွီးမွောကျသူမြားကို အောကျပါ ကှနျပြူတာဆိုငျရာ ဘှဲ့မြား ပေးအပျခြီးမွှငျ့သှားမညျ –
(၁) B. C. Sc.(Software Engineering)
(စ) အဆငျ့မီပါက မဟာဘှဲ့သငျတနျးနှငျ့ ပါရဂူဘှဲ့သငျတနျးမြားသို့ အဆငျ့ဆငျ့ ဆကျလကျတကျရောကျခှငျ့ ရှိသညျ။
(ဆ) တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့စိစဈလကျခံခွငျးကို အောကျပါအတိုငျးဆောငျရှကျမညျ။
– လြှောကျလှာလကျခံမညျ့ကာလ ၁၅-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၇-၂၀၁၈ အထိ
– ဝငျခှငျ့ရရှိသူမြားစာရငျးကွညောခွငျး ၁၅-၈-၂၀၁၈
– ကြောငျးအပျလကျခံခွငျး ၁၆-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၉-၂၀၁၈ အထိ
(ဇ) သငျတနျးဆိုငျရာ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို မန်တလေးကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ website www.ucsm.edu.mm တှငျကွညျ့ရှုနိုငျပွီး ဖုနျး-၀၉-၈၉၆၅၀၂၂၁၅ နှငျ့ ၀၉-၇၈၆၅၀၅၀၁၂ တို့သို့ ဆကျသှယျမေးမွနျး စုံစမျးနိုငျပါသညျ။
နိုငျငံခွားဘာသာတက်ကသိုလျ ပထမနှဈသငျတနျး ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာချေါယူ
ရနျကုနျနိုငျငံခွား ဘာသာတက်ကသိုလျ ပထမနှဈသငျတနျး (တရုတျဘာသာ၊ အင်ျဂလိပျဘာသာ၊ ပွငျသဈဘာသာ၊ ဂြာမနျဘာသာ၊ ဂပြနျဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ရုရှားဘာသာနှငျ့ ထိုငျးဘာသာ) အထူးပွုမြားသို့ ဝငျခှငျ့လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
– တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ စာမေးပှဲကို စုစုပေါငျးရမှတျ ၄၀၀ နှငျ့အထကျ ရရှိသူမြားဖွဈရမညျ။
– အင်ျဂလိပျဘာသာရပျ လြှောကျထားလိုသူတှဟော တက်ကသိုလျဝငျ စာမေးပှဲ တှငျ အင်ျဂလိပျဘာသာရပျကို ၆၅ မှတျနှငျ့ အထကျရရှိပွီး စုစုပေါငျး ရမှတျ ၄၀၀ နှငျ့အထကျ ရရှိသူမြားဖွဈရမညျဖွဈသညျ။
– လြှောကျထားသူတှဟော မွနျမာနိုငျငံသားဖွဈရပါမယျ။
လူတှနှေု့တျဖွစောမေးပှဲကို ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၂၅ ရကျမှာစတငျဖွဆေိုရမှာဖွဈပွီး အမှတျစာရငျး မူရငျးကို လညျး မပကျြမကှကျ တငျပွရမှာဖွဈပါတယျ။ ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာ ကို ဇှနျလ ၁၅ ရကျ မှစတငျကာ ရနျကုနျနိုငျငံခွားဘာသာတက်ကသိုလျမှာ ထုတျယူနိုငျပွီး ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျ နောကျဆုံးထားကာ နိုငျငံခွားဘာသာ တက်ကသိုလျကို တိုကျရိုကျလြှောကျထားနိုငျပါတယျ။ ဝငျခှငျ့ကို ဦးစားပေးဘာသာရပျ ၃ ခုထိ ရှေးခယျြလြှောကျထားခှငျ့ ရှိပါတယျ။
တရုတျဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
အင်ျဂလိပျဘာသာ – ၁၅၀ ဦး
ပွငျသဈဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ဂြာမနျဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ဂပြနျဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ကိုရီးယားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ရုရှားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး
ထိုငျးဘာသာ – ၅၀ ဦး
အသေးစိတျ အခကျြအလကျတှကေို ရနျကုနျနိုငျငံခွားဘာသာတက်ကသိုလျ ဖုနျး-၀၁-၅၃၅၉၈၅၊ ဒုတိယပါမောက်ခခြုပျ (သငျတနျး) ၀၁-၅၁၃၁၉၈၊ သငျတနျးရေးရာ ဌာန ၀၁-၅၁၅၂၃၆ ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
ရနျကုနျစီးပှားရေး တက်ကသိုလျတှငျ ပထမနှဈသငျတနျးဝငျခှငျ့ လြှောကျထားနိုငျ
၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈအတှကျ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲအောငျမွငျထားသော ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား ရနျကုနျစီးပှားရေးတက်ကသိုလျ စုစုပေါငျးရမှတျ ၄၀၀ နဲ့အထကျရသူမြား ပထမနှဈဝငျခှငျ့ အသီးသီးကို လြှောကျထားနိုငျပွီဖွဈကွောငျး ကွညောထားပါတယျ။
သငျကွားပို့ခပြေးသှားမယျ့ ဘာသာရပျမြားမှာ Bachelor of Economics (Economics) (B.Econ (Eco)), Bachelor of Economics (Statistics) B.Econ(Stats), Bachelor of Commerce (B.Com), Bachelor of Business Administration (B.B.A) စတာတှေ ဖွဈပါတယျ။ လြှောကျထား လိုသူတှအေနနေဲ့ တက်ကသိုလျဝငျ တနျး စာမေးပှဲကို မညျ့သညျ့ဘာသာတှဲဖွငျ့မဆို အောငျမွငျသူ ဖွဈရမှာဖွဈပွီး တက်ကသိုလျဝငျတနျးစာမေးပှဲတှငျ စုစုပေါငျးရမှတျ ၄၀၀ နဲ့အထကျ ရရှိသူ ဖွဈရမှာဖွဈပါတယျ။ စုစုပေါငျး ကြောငျးသားဦးရကေို ၁၂၀၀ ဦးထိ လကျ ခံပေးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ ရနျကုနျ စီးပှားရေးတက်ကသိုလျ ဝငျခှငျ့လြှောကျထား လိုသူတှအေနနေဲ့ ရနျကုနျ စီးပှားရေးတက်ကသိုလျရဲ့ သတျမှတျလြှောကျလှာပုံစံနဲ့ တိုကျရိုကျလြှောကျထား ရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈဘာသာကို ၄ နှဈကွာ တကျရောကျသငျယူရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဝငျခှငျ့လြှောကျထား လိုသူတှအေနနေဲ့ လူတှေ့ စဈဆေးခွငျး ဖွဆေိုရမှာဖွဈပွီး အခြိနျနရောသတျမှတျခကျြကို ရနျကုနျစီးပှားရေးတက်ကသိုလျတှငျ စုံစမျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျစီးပှားရေး တက်ကသိုလျ (လှိုငျနယျမွေ)တှငျ စုစုပေါငျးရမှတျ ၄၀၀ နဲ့အထကျရသူမြား ဖျောပွပါဘာသာရပျ တှကေို လြှောကျထား တကျရောကျနိုငျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ သငျကွားပို့ခပြေးသှားမယျ့ ဘာသာရပျတှေ က Bachelor of Accounting (B.Act), Bachelor of Population Studies (B.P.S), Bachelor of Public Adiministration (B.P.A), Bachelor of Development studies (B.Dev.S) စတဲ့ဘာသာရပျတှလြှေောကျ ထားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
လြှောကျထားလိုသူတှအေနနေဲ့ ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာတှေကေို ဇှနျလ ၁၅ ရကျမှစပွီး ဇူလိုငျ၁၅ ရကျအထိ လကျခံ ပေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ ၀ငျခှငျ့စာရငျးရရှိသူမြားကို သွဂုတျလ ၁၅ ရကျမှာကွညောပေးသှားမယျ လို့ ထုတျပွနျထားပါတယျ။
လြှောကျထားလိုသူတှအေနနေဲ့ တက်ကသိုလျဝငျတနျးစာမေးပှဲကို မညျသညျ့ဘာသာ တှဲဖွငျ့မဆို အောငျမွငျသူဖွဈရမှာဖွဈပွီး တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာမေးပှဲတှငျ စုစုပေါငျးရမှတျ ၄၅၀ နဲ့အထကျ ရရှိသူ ဖွဈရမှာဖွဈပါတယျ။ စုစုပေါငျး ကြောငျးသားဦးရကေို ၂၀၀ ဦးထိ လကျခံပေးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ ရနျကုနျ စီးပှားရေးတက်ကသိုလျ ဝငျခှငျ့လြှောကျထားလိုသူတှအေနနေဲ့ ရနျကုနျစီးပှားရေး တက်ကသိုလျရဲ့ သတျမှတျ လြှောကျလှာပုံစံနဲ့ တိုကျရိုကျလြှောကျထား ရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈဘာသာကို ၄ နှဈကွာ တကျရောကျ သငျယူရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဝငျခှငျ့လြှောကျထားလိုသူတှအေနနေဲ့ လူတှစေ့ဈဆေးခွငျး ဖွဆေိုရမှာဖွဈပွီး အခြိနျနရောသတျမှတျခကျြကို ရနျကုနျစီးပှားရေးတက်ကသိုလျမှာ စုံစမျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အသေးစိတျသိရှိလိုပါက ဖုနျး ၀၉- ရ၃၂၄၁၀၀၇၊ ၀၁- ၅၂၆၆၁၃ သို့လညျး ဆကျသှယျမေးမွနျး နိုငျပါတယျ။
မန်တလေးနညျးပညာတက်ကသိုလျ B.E/B.Arch/B.S သငျတနျးဝငျခှငျ့ လြှောကျလှာချေါယူ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ နညျးပညာတက်ကသိုလျ (မန်တလေး) ရဲ့ အငျဂငျြနီယာနဲ့ ဗိသုကာသငျတနျးတှအေတှကျ အမြိုးသား ၂၀၀ ဦးနဲ့ အမြိုးသမီး ၁၆၅ ဦးရေ ထိ ချေါယူသှားမှာဖွဈပါတယျ။ မွို့ပွအငျဂငျြနီယာ (Cvil Engg)၊ ဗိသုကာ (Archtecture)၊ စကျမှု အငျဂငျြနီယာ ( Mechanical Engg:)၊ အီလကျထရှနျနဈ အငျဂငျြနီယာ (Electronic Engg:)၊ လြှပျစဈစှမျးအား အငျဂငျြနီယာ (Electrical Power Engg:)၊ ကှနျပြူတာအငျဂငျြနီယာနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာ (Computer Engineering & Information Technology)၊ မက်ကာထရှနျနဈ အငျဂငျြနီယာ (Mechatronic Engg:)၊ သုတနညျးပညာ (Information Technology)၊ ဓါတု အငျဂငျြနီယာ (Chemical Engg:)၊ ရနေံ အငျဂငျြနီယာ (Petroleum Engg:)၊ သတ်တုတူးဖျောရေး အငျဂငျြနီယာ (Mining Engg:) နဲ့ ဇီဝနညျးပညာ (Biotechnology) သငျတနျးတှကေို ဖှငျ့လှဈသှားမှာပါ။ သငျတနျးကာလအနနေဲ့ B.E/B.Arch ဘှဲ့အတှကျ ၆ နှဈ၊ B.S ဘှဲ့အတှကျ ၄ နှဈဖွဈပွီး သငျတနျးကာလ ပွီးစီးအောငျမွငျပါက B.E/B.Arch ဘှဲ့နဲ့ B.S ဘှဲ့အသီးသီးကို တိုကျရိုကျအပျနှငျးခြီးမွှငျ့မှာဖွဈပါတယျ။
လြှောကျထားလိုသူတှဟော ၂၀၁၈ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲမှာ အောငျမွငျထားသူ၊ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲမှာ ရူပဗဒေ၊ ဓာတုဗဒေ၊ သခငြ်ျာနဲ့ အင်ျဂလိပျစာ လေးဘာသာ စုစုပေါငျးရမှတျ ၃၀၀ နဲ့ အထကျ ရရှိသူတှဖွေဈရမှာ ဖွဈပါတယျ။
လြှောကျလှာတှကေို ဇှနျလ ၁၅ ရကျမှ ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျထိ လကျခံပေးသှားမှာဖွဈပွီး ၀ငျခှငျ့တှကေို သွဂုတျလ ၁၅ ရကျမှာ ကွညောပေးမှာဖွဈပါတယျ။ သွဂုတျလ ၁၆ ရကျ မှ စကျတငျဘာလ ၁၂ ရကျထိ ကြောငျးအပျလကျခံမှာဖွဈပွီး လြှောကျလှာနဲ့အတူ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အောငျလကျမှတျမူရငျးနှငျ့ မိတ်တူ၊ ကြောငျးသားနဲ့ မိဘနှဈပါးရဲ့ နိုငျငံသားစိစဈရေး
ကတျပွားမိတ်တူ၊ ခွောကျလအတှငျးရိုကျကူးထားတဲ့ ရောငျးစုံဓာတျပုံ ငါးပုံပူးတှဲတငျပွရမှာဖွဈပါတယျ။
လြှောကျလှာတှကေို တက်ကသိုလျရဲ့ သငျတနျးရေးရာဌာန သို့ လူကိုယျတိုငျဖွဈစေ၊ စာတိုကျမှတဈဆငျ့ဖွဈစပေေးပို့ လြှောကျထားနိုငျပွီး လြှောကျလှာတှကေို တက်ကသိုလျရဲ့ သငျတနျးရေးရာဌာန (သို့) http://www.tum-mandalay.edu.mm တှငျရယူနိုငျပါတယျ။ အသေးစိတျကို နညျးပညာတက်ကသိုလျ (မန်တလေး) သငျတနျးရေးရာဌာန ဖုနျး-၀၉၄၃၁၇၅၀၃၄၊ ၀၉၉
၇၇၇၉၉၉၄၂ ကိုလညျးကောငျး [email protected] ကိုလညျးကောငျး ဆကျသှယျမေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါတယျ။
ရဆေငျးစိုကျပြိုးရေးတက်ကသိုလျ ပထမနှဈအတှကျ ကြောငျးသားဦးရေ ၃၀၀ လကျခံမညျ
ရဆေငျးစိုကျပြိုးရေးတက်ကသိုလျ ရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈအတှကျ ပထနှဈဝငျခှငျ့ကို ကြောငျးသား ဦးရေ ၃၀၀ လကျခံမယျလို့ သိရပါတယျ။
အဆိုပါတက်ကသိုလျမှ စိုကျပြိုးရေးသိပ်ပံဘှဲ့ (B.Agr.Sc) ငါးနှဈသငျတနျး အတှကျ ချေါယူခွငျးဖွဈပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အောငျမွငျထားသူတှေ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။ လြှောကျထားသူတှဟော မွနျမာနိုငျငံသားဖွဈရမှာဖွဈပွီး သိပ်ပံဘာသာတှဲဖွငျ့ အောငျမွငျထားသူ၊ တက်ကသိုလျဝငျ စာမေးပှဲရမှတျ ၄၀၀ နှဈ့ အထကျရရှိသူတှေ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။ လြှောကျလှာနဲ့အတူ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အောငျမွငျကွောငျးထောကျခံစာ (မူရငျး၊ အမှတျစာရငျး (မူရငျး)၊ မိဘနှဈပါးရဲ့ နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျ (မိတ်တူ)၊ အကငျြ့စာရိတ်တ ကောငျးမှနျကွောငျး ထောကျခံစာ၊ ဓာတျပုံ ၃ ပုံ ကို ပူးတှဲ တငျပွရမှာဖွဈပါတယျ။
လြှောကျလှာတှကေို ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၁၇ ရကျ နောကျဆုံးထားကာ ရဆေငျးစိုကျပြိုးရေး တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားရေးရာဌာနကိုပေးပို့ လြှောကျထားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဝငျခှငျ့မရရှိပါက တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ မဆုံးရှုံးစရေနျ တခွားသော တက်ကသိုလျမြားကိုလညျး လြှောကျထားရနျလိုအပျမှာ ဖွဈပါတယျ။
လြှောကျလှာတှကေို ဒီနရောမှာ download ရယူနိုငျပွီး အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ရဆေငျးစိုကျပြိုးရေးတက်ကသိုလျ ကြောငျးသား ရေးရာ ဌာန ဖုနျး – ၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၂၊ ဝနျထမျးရေးရာ ဌာန ဖုနျး-၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၃ ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါတယျ။
ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈ ပထမနှဈသငျတနျး ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာ
ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသငျနှဈ၊ ပထမနှဈသငျတနျး အသီးသီးအတှကျလြှောကျလှာ ချေါယူလကျြရှိပါတယျ။ ဝငျခှငျ့ကို ၂၀၁၈ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲတှငျ အောငျမွငျသူတှေ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
-သန်တာ ၊ ဝဝေေ